तारा रुबी अर्थ - छ रेड स्टार - एस्टरिज्म घटना - भिडियो
ट्याग रूबी, तारा
प्राकृतिक तारा माणिक र नीलमणि ढु stones्गाको अर्थ र मूल्य, परम्परागत रूपमा दागाहरू, झुम्का, हार र पेंडन्टको रूपमा गहनाहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्। मान रंग, स्पष्टता, वजन, र ताराहरूको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक स्टार रूबी किन्नुहोस्
केही माणिक ढु stone्गाले तीन-पोइन्ट वा छ किरण तारांकित वा तारा देखाउँदछ। यी माणिकहरू प्रभावलाई ठीकसँग प्रदर्शन गर्नको लागि क्याबोचन्समा काटिन्छ। एस्टेरिज्महरू एकल-प्रकाश स्रोतको साथ उत्तम देखिन्छन्। र प्रकाश सारिँदा वा ढु stone्गा पल्टाउँदा ढु across्गामा सर्नुहोस्। यी प्रभावहरू तब हुन्छ जब प्रकाश रेशममा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यो ढु the्गाको क्रिस्टल संरचना बनाउँछ। संरचनात्मक उन्मुख सुई समावेश, केहि निश्चित तरीकामा। यो एक उदाहरण हो जहाँ समावेशीकरणले रत्नको मूल्य बढाउँदछ। यसबाहेक, माणिकले र color परिवर्तनहरू देखाउन सक्दछ यद्यपि यो धेरै कम हुन्छ। चटयोन्सी वा बिरालाको आँखा प्रभाव पनि।
रूबी गुलाबी देखि रगत रातो रंगको रत्न हो। खनिज कोरुन्डम (एल्युमिनियम अक्साइड) को एक प्रकार। रत्न रंग कोरुन्डमका अन्य प्रजातिहरू हुन् sapphires। रूबी पारंपरिक कार्डिनल रत्न मध्ये एक छ। सँगृ नीलम, पनि नीलम, Emeraldर हीरा। रूबी शब्द रबेरबाट आएको छ, रातो लैटिनको लागि। रूबीको रंग क्रोमियम तत्वको कारण हो।
रूबीको क्वालिटी यसको रंगमा निर्भर गर्दछ। साथै काटिएको, र स्पष्टताबाट। कुन, क्यारेट वजन संग, यसको मूल्य को लागी असर गर्छ। रातो र bloodको चहलपहल र सबै भन्दा बहुमूल्य छाया, रगत रातो वा कबूतर रगत, समान गुणको अन्य माणिकको तुलनामा ठूलो प्रीमियम आदेश दिन्छ। रंग पछि स्पष्टता पछ्याउँदछ: हीरा जस्तै। एक स्पष्ट पत्थर एक प्रीमियम आदेश हुनेछ। कुनै सुई-जस्तो समावेशीकरण बिना एउटा तारा रूबी औंठी त्यो संकेत हो जुन ढु stone्गाको उपचार गरिएको हुन सक्छ वा सिंथेटिक। रूबीको लागि पारंपरिक जन्मदिन हो। र यो सामान्यतया अधिक गुलाबी छ गारनेट। यद्यपि केहि rhodolite garnets प्रायजसो रूबीहरूलाई एक समान गुलाबी रंग छ।
तारा वा तारांकित घटना
गेम कटर प्रायः क्याबचोन आकारहरू काट्न छनौट गर्नुहुन्छ, जब पत्थरहरू कम गुणस्तर हुन्छन्। यस्तो जवाहरात र ढुङ्गामा जब रोशनी क्याबोचोन सतहमा आउँछ र तारा जस्तो किरणहरू बनाउँदछ। घटना तारा वा तारा पनि तारा हो। त्यहाँ छन् र6रे ताराहरूले सामान्यतया अवलोकन गरे। यो हुन्छ जब क्रिस्टल भित्र समावेशन वा रेशम जस्तै सुई को अभिविन्यास एक भन्दा बढी अक्ष मा छ।
म्यांमारबाट बर्खास्तित तारा रुबीहरू (बर्मा)
तारा रुबी अर्थ र उपचार गुणहरू लाभ
स्टार रूबीको मालिकलाई धनी बनाउनको एक अर्थ र गुणहरू छन्।
यो लामो समयको लागि गहनाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र धेरै शक्तिशाली व्यक्तिहरू यसलाई मन पराउँछन्। यो रत्नको उर्जा यति शक्तिशाली छ कि यसलाई गहनाका राजा पनि भनिन्छ। मानिसहरुले विश्वास गरेका छन कि तिनीहरुले कुनै पनि प्रकारको कठिनाई लाई जित्न सक्छन। यो भनिएको छ कि यदि स्टार रूबीले यसको सामर्थ्यको पूर्ण उपयोग गर्न सक्दछ भने, यो विश्वमा सबै परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ।
DeLong स्टार रूबी
DeLong स्टार रूबी, १००..100.32२ क्यारेट अंडाकार क्याबोच स्टार रूबी। यो म्यानमारमा १ 1930 .० को दशकमा पत्ता लागेको थियो। यसलाई मार्टिन एहर्मानले एडिथ ह्याग्जिन देलL्गलाई २१,21,400०० अमेरिकी डलरमा बेचे, जसले पछि न्यु योर्क शहरको अमेरिकन म्यूजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीमा दान गरे।
अक्टूबर २,, १ 29 On1964 मा, डेलong्ग तारा रूबी ज्याक रोलान्ड मर्फी र दुई अन्य साथीहरू द्वारा कुख्यात गहना चोरी गर्ने थुप्रै बहुमूल्य रत्नहरूमध्ये एक थियो। जनवरी १ 1965 .25,000 मा, स्टार अफ इंडिया र मिडनाइट स्टार सहित चोरी भएका नौ रत्नहरू एउटा बस डिपो लकरमा बरामद गरियो। यद्यपि, DeLong रुबी तिनीहरूमध्येका थिएनन्। केही महिनाको वार्तालाप पछि, रूबीको अज्ञात धारक डिक पिअरसनलगायत तेस्रो पक्षमार्फत २$,००० डलरमा तिर्ने कुरामा सहमत भए। धनी फ्लोरिडाका व्यापारी जोन डी म्याक आर्थरले तिर्ने पैसा तिरेको थियो र उनी सेप्टेम्बर २, १21965 मा रूबीलाई तोकिएको ड्रप अफ साइटमा पाएपछि पाम बीच नजिकैको सनशाइन स्टेट पार्कवे स्थित सेवा प्लाजामा रहेको एउटा फोन बुथ, फ्लोरिडा महिनौंपछि डिक पिअरसनलाई जर्जियामा गहनाको पसलमा चोरी गरेर पक्राउ गरिएको थियो र $ १०० बिल लिई फिरौतीको पैसाको मिलान भएको सिरियल नम्बरमा भेटियो। डेलोंग तारा रुबीको केसमा संलग्न भएको कारण उनलाई दोषी ठहरियो र उनलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाईयो
के तारा माणिक मूल्यवान छ?
तारा माणिक भनेको दुर्लभ माणिक हो। तिनीहरू संसारमा उपलब्ध रंगीन रत्नको सबैभन्दा बहुमूल्य प्रकारहरू हुन्। तारा माणिक विरलै छ र मूल्य तुलनाको आकार को हीरा भन्दा अधिक मूल्यवान हुन सक्छ।
तारा माणिकाहरू कसरी गठन हुन्छन्?
रुबीज खनिज कोरुन्डम मिलेर बनेको छ। रूबी तब हुन्छ जब त्यहाँ कोरुन्डममा क्रोमियमको सानो अशुद्धता हुन्छ। क्रोमियमले ढु stone्गाको रातो र makes बनाउँदछ। ताराले ढु stone्गाको क्रिस्टल संरचना अनुसरण गर्दछ, जो हेक्सागोनल हो यदि तपाईं क्रिस्टल काटिएको देख्नुहुन्छ भने मुख्य अक्षसँग समानान्तर। हेक्सागोनल संरचना समानान्तर रेखाको directions दिशाको साथ बनेको छ। जब ढु stone्गा क्याबोचोनको रूपमा काटिन्छ, ती pa समानांतर रेखाहरूले देखिने lines लाइन वा lines रे ताराहरू बनाउँदछन्। म्याग्निफाइ glass ग्लास प्रभावद्वारा क्याबोचोनको गुम्बज पारदर्शिता द्वारा बनाईएको।
कसले तारा रुबी लगाउन सक्छन?
प्रख्यात र लोकप्रियताको खोजीमा रहेका रचनात्मक व्यक्तिहरूले यो ढु wear्गा लगाउँदछन्। यस ढु stone्गाको उपयोग अत्यधिक रूपमा सिफारिस गरिन्छ जो निरन्तर खराब स्वास्थ्य बाट पीडित छन्। यो रत्न कलाकार, सुनार, कलाकार, सरकारी अधिकारी, शेयर ब्रोकर, कपास र कपास उत्पादनहरूको डीलरका लागि पनि आवश्यक छ।
कुन रंग स्टार रुबी सबैभन्दा मूल्यवान छ?
रंग तारा रुबीको मूल्यलाई असर गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। उत्तम रुबीमा एक शुद्ध, जीवन्त रातो देखि थोरै बैजनी रातो रंग छ। धेरै बजारहरूमा, शुद्ध रातो रंगले उच्च मूल्यहरू आदेश दिन्छ र सुन्तला र बैजनीको ओभरटोनको साथ रूबीको कम मूल्य हुन्छ।
Buy natural star ruby in our gem shop
हामी प्राकृतिक तारा माणिक र नीलमणि ढु stones्गाको साथ कन्ट्री, झुम्का, हार, पेंडन्टको रूपमा कस्टम मेड गहना बनाउँछौं ... कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
गिलास भरिएको रूबी
ट्याग भरियो, गिलास भरियो, रूबी
ट्याग नीलम, तारा